उकेराले थामेको खाली मन – Mero UK
उकेराले थामेको खाली मन
June 27, 2017 August 12, 2017 / Blog / By Neer Khadka
यो एउटा अर्धविराम मात्र थियो, तर त्यसको अन्तराल भने लामो हुन गयो र यस अन्तर्निहित अन्तरालभित्र दोस्रो कडीको समन्वयमा एउटा अर्को अन्योल इकाइको पृष्ठभूमि एक तमाससँग जम्यो बीचमा कि सर्वप्रथम त्यसलाई प्रसँगसँग पृथक राख्न खोज्ने जमर्कोले नै कुरा लम्बिईन गएको हुन सक्छ ।
उनीहरुले भर्खरै मलाई जमिनमा पछारेकाथिए र एउटा उनीहरुकै लागि कर्णप्रीय अट्टहासमा मग्न ती हूल वर्णहरुमा, जमीनमा थला परेको मेरो अवस्थामा निष्चेस्टता भेटेर अनायासै अर्धविराम चिन्ह टाँस्सिएका हुनसक्छ ।
दोब्रिएर जमीनभन्दा तल झुक्न नसकेको मेरो अवस्था ‘प्यारालाइज्ड्’ थियो । आखिर धुलो पो हुुन पुगेछु म, आफ्नैहरुको आँखामा । सपनाको बलौटे फाँटहरुमा एउटा सायद सुन्दर भविष्यको खाका तयार पारेर कोरिएका ती एपिटाफहरु कति चाँडै यथार्थको दमनरुपी छालले पखालिसकेछ, थाहै भएन । मुठीभित्र टम्म पारेर सँगालेका जिजीविषाका अभिलेखहरु आफ्नै स्वामित्वमा रहेको भ्रम, पलभरमा नै हात खोल्दा पो थाहा भयो… थरि–थरिका दिग्भ्रमित रेखाहरु र जिन्दगीको ठोक्करले पारेका ठेलाहरु बाहेक केही रहेनछन्, र उक्त खाली हातहरु अहिले जमीनको धूलोमा आवाद बनेकोछ ।
चोट महसुस गरिन्छ तर शब्दमा उतार्न गाह्रै हुन्छ । दुखाइलाई परिवर्तित मुहारको असहजपन या विभिन्न किसिमको आर्तनादबाट सायद छुट्याउन सकिएला, तर मलाई विश्वास छ म स्लेट भएको छु । धुजा–धुजा परेको पेटिकोट लगाउने महिलालाई सायद छोप्ने नै चाहना हुन्छ होला, तर मेरो चोटले त्यो सीमा पनि पार गरेकोछ, सायद चोटैभन्दा माथि या मानवीय सम्वेदनाभन्दा बैग्लै खेपेकोछ होला ।
कता–कता थुम्थुम्याऊँ? कुन कुुनातिर सुम्सुम्याऊँ? निचेष्ट म उनीहरुको कार्यको समन्वयको प्रतिक्षामा छु, किनकि त्यो सिर्फ अर्धविराम थियो पूर्ण विराम होइन । म मानिसहरुको घृणाको पराकाष्ठालाई भोग्ने तयारीमा छु, किनकि कृपाले दुखेँ, मायाले जलेँ, दयाले छचल्किएँ, आँतसँगै आँखाबाट । हेरुँ, आज आफ्नैहरुको घृणाको तयारी र यसको पराकाष्ठाहरु!
‘म-यो कि क्या हो?’ टाढैबाट जस्तो गरी आवाज सुनियो । स्वरमा जिज्ञासासँगै खिन्नताझैँ लाग्थ्यो । सायद निरास पो छन् कि! म सजिलैसँग चल्मलिने प्रयत्न गरेँ र कसैको कसिलो लात देब्रे कोखामा पाई दोब्रिएँ । आफैलाई अनौठो लाग्यो, ‘आह!’ सम्म निक्लिएन मुखबाट । मस्तिष्कमा उसको हँसिलो मुहार अनि भरिलो गालाबीचका खोपिल्टाहरुको सजीव तस्वीर छाइरह्यो । आँखाहरुको परेली नचाउँदै कुरा गर्ने उसको बानी मलाई औधी मन पर्छ । एकदिन प्रसँगवस मैले भनेको थिएँ – ‘तिमी हाँस्दा बन्ने त्यो गालाका खोपिल्टाहरु मलाई असाध्यै मन पर्छ, ती नै मेरा जीवनका नीधिझैँ लाग्छ, चोटका मलहमझैँ लाग्छ’ । उसले फेरि प्रदर्शन गर्दै भनेकिथिई – ‘हुन्छ, जब तिमीलाई चोट लाग्छ, म नरोएर रमाई–रमाई हाँसिदिन्छु’ ।
मुश्किलले आँखा खोल्न पुगेँ र उसलाई आफ्नो दाजुको काँधमा हात राख्दै मुस्कुराइरहेझैँ देखेँ र छुट्याउन भने सकिनँ, मलाई त्यो गालाका खोपिल्टाहरु मलहम बनिरहेछ मनको घाउको या चुक!
एउटा समय थियो, जीवन फुलझैँ फुलिरहेकोथियो । मधूमासका दिन–रातहरुले जीवन फलाउँदै गएको थियो । म गीत गाउँथेँ र ऊ सुन्ने गर्दथिई । एउटा मीठो सरगम र न्यानो तालीले एउटा अवस्थाको शूभारम्भ भने भएको थियो । किनकि एउटी गरिमामय प्रशँसकको न्यानो प्रेममय सदभावनामा म आफूलाई निर्लिप्त पाएँ र समर्पित भएँ यस बिरानो मुलुकमा उसको भरोसामा, उसको आडमा ।
ताली बजाउनेहरुको लहरमा उभिएर ऊ उस्तै गरी मुस्कुराउँदथिई र उसका कोमल–कोमल हातहरु यसैगरी एकअर्कामा ठोकिन्थे जसरी सायद यतिखेर, उसका दाजुहरुले मलाई दण्डित गरेकोमा समर्थन जनाउँदैहोली ।
एउटा भावुक मन तरलिँदै गएको थियो । उसको मायाजालमा र उसको सुन्दरतम मुहारको कवी पनि बनेकोथिएँ । एउटा दह्रो आड पाएपछि आफ्नो बिगतलाई सिँगार्ने ध्याउन्नमा म चलायमान भएँ उसैगरी नेपालीहरुको जमातमा, यहाँको फाँटहरुमा । फेरि एकपटक भन्दैछु, जमीनभन्दा मुनि झुुक्न नसकेर घस्रिईँदै, धेरै स्वाभिमान, अभिमान र वीरताको उँचोपनलाई निहुराएर जीवनरत भएँ ।
एउटा त्यो आवेग, जन क्षणिक आकर्षणद्वारा, सतही प्रलोभनद्वारा अभिभूत हन्छ, त्यो मूठीको बालुवा पो बन्दोरहेछ । ममा सायद ऊ यस्तै आवेगले नजिकिएकिथिई र उसैगरी कपको चिया जस्तै चिस्सिईँदै गई अनि म भने एउटा अपच्य र तीतो स्वादमा रुपान्तरित हुँदै गएँ । ऊभन्दा बाहिर पनि मेरो आफ्नै दुनिया थियो र उक्त सँसारको लागि केही गर्न पर्ने कर्तव्यमा प्रयत्नशील हुनुुपथ्र्यो । यसैगरी यहीँ एउटा खाडल तयार भएछ ऊ र मेरो सान्निध्यबीच अनि उक्त खाडल एउटा पार गर्न नै नसक्नेगरी फैलिँदैगएछ एउटा नियमितताबिना । म जोडिईन खोज्दा–खोज्दै टुक्रिन पो पुगेछु ।
अतः ऊ आफुहरुसँगै क्रमबद्ध हुने क्रममा ठोस एवँ जटिल बन्दै गई र मलाई प्रष्टसँग थाहा छ, ऊ उक्लन खोज्दा–खोज्दै दिन–प्रतिदिन झन् तल झर्दै गएकिथिई । हो, स्वभावतः म लोग्नेमान्छे र उसको लोग्ने अनि उसमा निर्भर, त्यसैले इर्ष्या तथा जलनको पीडाले मर्माहत भई केही सम्झाउने प्रयत्नमा शक्ति पो प्रयोग गर्न पुगेछु र त्यो नै मेरो ठूलो क्षमारहीत भूल हुन गयो । यसै त मेरो दैनिकीले र मेरो बेफुर्सदिले ऊ आफूमा भएको सौन्दर्यमा निरसता सम्झेर फलाम बनी तातिएकिथिई, र त्यसमा राम्रो प्रहार मेरो विरोधले गर्‍यो र ऊ एउटा ठोस आकारमा परिणत भई उक्त शास्वत मनसँगै पनि ।
म उसलाई पगाल्न खोज्दा–खोज्दै दिन–प्रतिदिन हेय हुँदै गएँ । एउटा मिहिन आस्थाको पनि शेष नरहेर आज उसैद्वारा एउटा व्याकूल अवसाद भएँ, विषाक्त उपस्थिति भएँ र यसरी अब गिराईँदैछु कि सायदै फेरी उसकोअगाडि शिर उठाउन सकुँला ।
अतः एउटा विषाक्त र विवस परिस्थितिबीच लाचार, निरुपाय अनि बेवारिसे भई आफ्नैहरुको सौहार्दताले जमिन भइरहेकोछु । लाचारीको चरम सीमामा शिरनत गर्दै माफी मागेर ती बिगतका सपनाहरुलाई थाँती राख्ने बिचारको मेरो मनमा र उक्त भावले उद्देलित भएको शरमको आगोले पोलेर राँकिएको अनुहारमा उसको झट्कारो स्तरको लोप्वाले अचानक छिद्र भई तीर्ण–तीर्ण हुुन पुगेछु । ती उही सुकोमल हातहरु थिए, जसद्वारा ऊ ताली बजाई मलाई प्रेरणा दिने गर्दथिई, जसलाई म सगर्व चुम्वन गर्दथेँ, मेरो जीवन बनाईदिने हातहरु भनेर र जसले बार–बार मेरो मुहार सुम्सुम्याइरहन्थे ।
थाक्नुको सीमाभन्दा बढी थाकेर म बद्हवाश भास्सिन पुुगेँ, मेरो हालात र सपनाका चरमचुलीबीच । लामो वक्तव्यझैँ गाली र अन्य तथानामका बोली बचनहरुको सम्प्रेषण गरिसकेपछि ऊ उनीहरुसँगै पलायन भई सजिलैसँग र म मनभित्रको भुइँचालो या टाइफूनले आक्रान्त भई मूक भएकोछु । मलाई थाहा छ, मेरो सामु अब अनगिन्ति प्रश्नहरु उभिइनेछन्, र केही समयभित्र म यो प्रवासबाट धपाईनेछु र ती भविष्यका स्वप्निल दृश्यहरु, एउटा भयँकर स्वरुपमा एकाकार भएर मतिर यसरी कालो अन्धकार फैलाउँदै लम्कनेछ कि म सम्पूर्णतः अनि स्वतः विलीन हनेछु ।
दृश्यहरु उस्तै सँधैकै जस्तो लाग्छन् । म यो कुनाबाट उस्तै देख्दैछु । मानिसहरु आइरहेछन्, गइरहेछन् गन्तव्यतिर सायद! हाँसिरहेकाछन्, रमाइरहेकाछन् । कोलाहलले व्याप्त यो शहरको यो कुनामा मेरो मनभित्रको रोदन, एउटा क्षणिक र सतही हावाभित्रै हावा भएको छ ।
यसरी आँषिक लडिरहेकोछु यो कुनाको भुँइमा… सबै आ–आफ्नै धुनमा मस्त भई चलायमान छन् । म उस्तैगरी विखण्डित् मन मस्तिष्कसहित बेवारिशे टोलाइरहन्छु । …पर–पर… कतै टाढा… कतै समाधानको आशामा र सहानुभूतिको प्रलोभनमा । …एउटा घिस्रिएरै पनि बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा… निरन्तर अनि रिरुत्तर… उदास अनि उजाड… ।